Gịnị mere o ji adọrọ adọrọ Iji Zụlite Travel Na Europe? | Save A Train
Home > Travel Europe > Gịnị mere o ji adọrọ adọrọ Iji Zụlite Travel Na Europe?
(Emelitere ikpeazụ On: 25/06/2021)
Ewere ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị underrated forms of oge a na njem. ka Intercontinental ụgbọelu agafe ghọọ ndị ọzọ ọnụ kwa afọ, ma ụgbọ oloko na-na ịrị elu n'ebe nile. E nwere ọtụtụ ihe mere njem ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ndị kasị adọrọ mmasị ụzọ ịgafe mba ala.
Dị ka ọmụmaatụ, na nlegharị anya awa site Bernina Express naanị bụ iji tọghata ọ bụla ụgbọelu enthusiast n'ime a ụgbọ okporo ígwè keonye ofufe. Ndinyanade mbịne si Chur na St. Moritz na ọmarịcha ọwụwa anyanwụ Switzerland n'ebe ugwu Italy si Tirano, na Bernina Express na-mara dị ka ndị kasị mara mma agbaga ụgbọ okporo ígwè na njem n'ụwa. Njem a jikọrọ abụọ abụọ a ngụkọta nke 90 kilomita. na n'aka 4 awa cinematic Alpine Okirikiri, kpụkọrọ, nnukwu waterfalls, na ịrịba ama ndagwurugwu.
All nke mara mma a na-ahụ anya site na Express ụgbọ oloko na-emesapụ aka vista windo n'ime ụgbọ ala ọ bụla. The njem culminates na Bernina Pass. na 7,000 ụkwụ elu oké osimiri, ngafe bụ ewekarị dajụọ snowstorms. Ka ọ dịgodị, anwụ na-acha Italy na-echere gị na na nsọtụ ọzọ nke a na njem. Nke a mara mma agbaga ụgbọ okporo ígwè kwesiri ịbụ iwu na ndepụta ịwụ ụgbọ okporo ígwè ọ bụla hụrụ ụgbọ okporo ígwè n'anya.
German ụgbọ okporo ígwè
Ka ọ dịgodị, n'isonyere Express na na ndepụta na-na DB ma ọ bụ Deutsche Bahn. Germany si mba ụgbọ okporo ígwè netwọk awade ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị mara mma agbaga agafe nso River Rhine. Ya ụzọ gasị ga-ewe gị site na-egbu echiche nke Alps na ugwu na ndagwurugwu. Dị ka ọmụmaatụ, ụzọ kasị mma inye ekele Europe nke fọdụrụ n'ezinụlọ osimiri bụ site ụzọ na-ejikọ ndị obodo nke Mainz na Cologne. Nke a ụzọ na-ewe gị site nwayọọ ugwu nta, ntisa castles, na ogologo ubi vaịn.
DB awade mgbe ụgbọ okporo ígwè agafe na Jikọọ obodo ndị dị ka Amsterdam, Copenhagen, na Prague na Germany bụ isi na metropolises. Yiri Bernina Express, ọ bụ a mma ụzọ ahụ Europe gafere. Ọ bụ ihe ijuanya na CNN na-ezo aka Deutsche Bahn dị ka "Otu n'ime ndị kasị obi ụtọ German njem ahụmahụ na-adịghị etinye a Mercedes-Benz 450. " Mgbe Europe ụgbọ oloko na-anọkarịrị ịna ogologo cross-mba na cross-Afrika njem, e nwere ndị ọzọ mkpumkpu nhọrọ maka ihe ukporo ụgbọ okporo ígwè eme njem. Dị ka ọmụmaatụ, na Berlin Ringbahn ka mgbe niile na-ewu ewu n'etiti njem nleta ndị na-achọ a dị mfe nlegharị anya njem nke obodo. I nwere ike na-agbalị a maka ndị na-price nke a otu tiketi.
Ọ dịghị okwu nke na-adọrọ mmasị ụgbọ okporo ígwè njem ga-ezu na-enweghị gụnyere Trans-Siberia Express. Makwaara dị ka fọdụrụ n'ezinụlọ ụgbọ okporo ígwè na njem na mbara ala, Trans-Siberia Express ejikọ Moscow dị n'ebe ọdịda anyanwụ Russia na ala gbara osimiri okirikiri obodo nke Vladivostok na Eastern Russian. N'ụzọ, ụgbọ okporo ígwè ụgbọ oloko na-abanye n'ime nso mba dị ka China, Mongolia, na North Korea. Ọtụtụ ebe na Western Europe, tinyere Amsterdam, nwere n'ọdụ ụgbọ okporo ígwè na-enye agafe na Trans-Siberia ojii na St. Petersburg, Russia. Sịkwa ihe mere ọtụtụ ndị Europe ịhọrọ ime ụgbọ okporo ígwè ahụ mgbe ahapụla ọwụwa anyanwụ.
Njem na Russia site na ụgbọ okporo ígwè bụ otu n'ime ọnụ ala ụzọ njem. N'eziokwu, ọ bụ nakwa otu n'ime slowest, na Ladbrokes na-azọrọ na ihe n'otu ntabi anya sleeper ụgbọ okporo si Volgograd ka Nizhny Novgorod ewe 27 awa. ka, Russia ji ọtụtụ ụgbọ okporo ígwè usoro hụrụ ọtụtụ ihe a afọ mgbe na mba kwadoro World Cup. Ọtụtụ Fans hụrụ ndị ọzọ nke mba ahụ na ndị mmadụ ya dị ka ha na-aga na fixtures ụgbọ okporo ígwè.
Nke a bụ akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị ma na-elegharakarị anya ụgbọ okporo ígwè njem. n'ezie, ọ dịghị ihe dị ka ndị na ahụmahụ ị ga-ezute n'ụzọ. Jikere izute ụfọdụ n'ime ihe ndị kasị adọrọ mmasị ndị mmadụ si n'akụkụ nile nke ụwa. Bụla cross-mba ụgbọ okporo ígwè na njem ị na na na, i nwere ike ejedebe na-achọta a enyi ma ọ bụ abụọ n'etiti ibe n'otu ntabi anya ndị njem. Ma ị na-na-ewere sinik Bernina Express, -agafe ọtụtụ mba na ma na Deutsche Bahn ma ọ bụ ndị Trans-Siberia Express, ma ọ bụ atụrụ ndụ na Switzerland si glasia Express, nke The Culture Njem kọwara dị ka a na njem na-azọ ndị nlegharị anya nke Bernina, na-aga site na ụgbọ okporo ígwè na-aghaghị ịbụ otu n'ime ndị kasị adọrọ mmasị ahụmahụ nke ndụ gị.
Iji nweta ahụmịhe kachasị mma na ndụ gị, na ọnụ ala dị ala, na napụla asọ anyị oyi ntinye akwụkwọ ụgwọ, were Save A Train!
Ị chọrọ Embed anyị blog post jidesie gị na saịtị, wee pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ffascinating-train-travel-europe%2F%3Flang%3Dig - (Pịgharịa gaa na ala ịhụ Embed Usoro)
I am a private blogger, love trains & njem, if you have spare time i would love if you comment on my posts, because it is important for me to get feedback from my readers, enjoy. - Ị nwere ike pịa ebe a iji ịkpọtụrụ m